ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ LED မီးလုံးများ ထုတ်လုပ်သူများ - China Explosion-proof LED မီးအိမ် ပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
FCT93 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ LED မီးများ
2.အလင်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေးစီမံကိန်းနှင့် ခက်ခဲသောနေရာများကို အစားထိုးခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
3.ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဇုန် 1၊ ဇုန်2အတွက် သင့်လျော်သည်။
4. ပေါက်ကွဲသောလေထု- အတန်း ⅡA၊ⅡB၊ ⅡC
5. ဧရိယာ 22၊ 21 ရှိ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
6. မြင့်မားသောအကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ၊ စိုစွတ်သောနေရာများအတွက်သင့်လျော်သော;
7. အပူချိန် -40 ℃အထက်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သင့်လျော်သည်။
BAD63-A စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော LED မီးအိမ်
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံချက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ဘုံအလင်းရောင်နှင့် အလုပ်အလင်းရောင်အတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
2. အလင်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေးစီမံကိန်းနှင့် ခက်ခဲသောနေရာများကို အစားထိုးရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
3. ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဇုန် 1၊ ဇုန် 2;
FCD(F,T,P)96 စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော LED မီးလုံး
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ရေးနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ဘုံအလင်းရောင်နှင့် အလုပ်အလင်းရောင်အတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
4.ပေါက်ကွဲသောလေထု- အတန်းအစား II A၊ II B၊ II C;
5.ဧရိယာ 22,21 ရှိ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
7. -50 ℃မှ +50 ℃ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သင့်လျော်သည်။
FCF98(T,L) စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ရေလွှမ်းမိုးမှု (ကာစ်၊ လမ်း) LED မီးအိမ်
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ဘုံအလင်းရောင်နှင့် အလုပ်လုပ်သောအလင်းရောင်အတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
4. ပေါက်ကွဲစေသောလေထု- အတန်း ⅡA၊ⅡB,ⅡC;
7. -50 ℃မှ +50 ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
FCD63 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော LED မီးများ (စမတ်မီးမှိန်မှိန်)
1. ရေနံရှာဖွေခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် အထွေထွေအလင်းရောင်နှင့် လည်ပတ်မှုအလင်းရောင်အတွက် အခြားသောနေရာများဖြစ်သည့် အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
BAD63-A စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော LED မီးလုံး (ပလပ်ဖောင်းမီး)
FCT93 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ LED မီးများ (Type B)
BAD63-A စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်းဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော LED မီးအိမ် (မျက်နှာကျက်ဆီမီး)